ပိုမိုမြင့်မားသောရောင်းအားအတွက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရလာဒ်များအပေါ်အချိန်ဖြုန်း | Martech Zone
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 17, 2013 စနေနေ့, သြဂုတ်လ 17, 2013 Douglas Karr
Econsultancy ရဲ့ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံစစ်တမ်းအစီရင်ခံစာနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကောက်ယူ ဘာလဲ - အွန်လိုင်းအသုံး ၀ င်မှုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသုတေသနဝက်ဘ်ဆိုက်သည်စာရင်းအင်းအတော်များများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းကသုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံသည်ရောင်းအား၊ ပြောင်းလဲမှုများနှင့်သစ္စာရှိမှုတို့ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ (UX) သည်ထုတ်ကုန်တစ်ခု၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်လူ့ - ကွန်ပျူတာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်ပိုင်ဆိုင်မှုတို့၏အတွေ့အကြုံ၊
ငါအဓိပ္ပါယ်နှင့်လုံးဝသဘောမတူဘူးနေစဉ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနည်းနည်းလျော့နည်းဘာသာရပ်ကိုကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒါ .... မဟုတ်ဘူး အားလုံး သုံးစွဲသူအကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသင့်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးကွာဟချက်ကိုကျော်လွှားရန်သတင်းအချက်အလက်၊
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်သင့် site ပေါ်တွင်ခြေရာခံရန်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်များ -
ပြောင်းလဲမှုနှုန်း - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိလာပြီးအမှန်တကယ် ဦး ဆောင်ရောင်းချခြင်းသို့ကူးပြောင်းလာသည့်လူများ၏ရာခိုင်နှုန်းကားအဘယ်နည်း။ သင်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါပြီ သင့်ရဲ့ Analytics မှအတွက်ရည်မှန်းချက်များ တိုးလာသည်ဖြစ်စေလေ့လာရန်နှုန်းထားလား။
ဘောင်းနှုန်း - သင်၏ site သို့မည်သည့် visitors ည့်သည် ၀ င်ရောက်လာပြီးချက်ချင်းထွက်ခွာသွားသနည်း။ ၎င်းသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုရေးအတွက်အကောင်းမမြင်နိုင်သည့်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုပြသည်။ ထို့ကြောင့် visitors ည့်သည်များသည်သူတို့ရှာတွေ့မည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှော်လင့်လျက်ရောက်ရှိလာကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကိုမောင်းနှင်သောသော့ချက်စာလုံးများသည်သက်ဆိုင်ပါကသင်နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသေးသည်။ သင်ဖြည့်စွက်သောသတင်းအချက်အလက်သည်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ သင်ကသူတို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းသို့မပါ ၀ င်ပါ။
ဆိုက်ပေါ်တွင်အချိန် - ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင့်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်အချိန်ပိုသုံးသူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းကိုခံရလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲနိုင်သောကောင်းသော ဦး ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် (သင်၏မက်ထရစ်များကွာခြားနိုင်သည်!) ။ သင် visitors ည့်သည်များပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဆွဲဆောင်ရန်ဘာလုပ်နေလဲ? ဗီဒီယိုရှိလား။ Whitepapers? ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ? blog လား။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုတွန်းအားပေးသောသတင်းအချက်အလက်မျိုးစုံကိုပေးခြင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်
ထို့အပြင် User Experience သည်သင်၏ site ၏ဒီဇိုင်း၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်သင်၏ visitors ည့်သည်များလိုအပ်သည့်သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုများစွာမှီခိုနေသည်ဟုပြောစရာမလိုပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ၊ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနည်းပါးခြင်းကသင်၏စီးပွားရေးကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့အနည်းငယ်သာဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စာဖတ်ရန်ခက်ခဲစေသည့်ဖောင့်များနှင့် whitespace ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားအလုံးစုံယုံကြည်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်။ ထို့အပြင်မကြာခဏမဖြစ်ဘဲစျေးကွက်ပြောဆိုခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးသင်၏ solution ည့်သည်များအနေဖြင့်သင်၏ပြsolutionနာအားဖြေရှင်းနည်းရှိမရှိကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့်။ သင်သံသယဖြစ်လျှင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်မတတ်နိုင်ပါကသင်၏ဆယ်ကျော်သက်သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖမ်းပြီးသူတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုရယူပါ။ သင်အံ့အားသင့်မှာပါ။
Tags: တုံမှုနှုန်းစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကူးပြောင်းနှုန်းသဘာဝဖောင့်analytics googleGoogle analytics ရည်မှန်းချက်များသတင်းအချက်အလက်အရောင်းစွမ်းအားsite ပေါ်တွင်အချိန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်ကြားနေရာလွတ်